3:16 pm - Wednesday January 21, 1699
Home » Archive by Category "Euro 2016"
Latest News on Euro 2016
Xulka Qaranka Denmark Oo Afar Sannadood ...
Xulka Qaranka Denmark Oo Afar Sannadood Laga Mamnuucay Ciyaaraha
Xulka qaranka haeenka Denmark ayaa lagu riday ganaax ciyaaraha lagaga mamnuucay afar sannadood oo aanay ka qayb-geli doonin tartamada. Go’aan uu soo saaray xidhiidhka kubadda cagta qaaradda urub ee UEFA ayaa waxa lagu sheegay in xulkani aanu qayb ka noqon doonin ciyaaraha dunida ka dhacaya,... read more »
Xulka Germany Oo Noqday Horyaalka Qaarad...
Xulka Germany Oo Noqday Horyaalka Qaarada Yurub ee Dadoodu 21 Jirada Ka Yar...
Xiddigaha da’da yar ee xulka Germany ayaa ku guuleystay koobka aduunka ee ciyaaryahanada 21 jirada da’doodu ka hooseyso, kadib markii ay kulankii finalka 1-0 ku caraabiyeen qaranka Spain. Gool uu daqiiqadii 40 aad ee ciyaarta qaybteedii hore shabaqa ku xareeyey laacibka, Mitchell Weiser... read more »
GERMANY IYO SPAIN OO ISUGU SOO HADHAY FI...
Saddex gool oo uu isku raaciyey, laacibka kooxda Atletico Madrid khadka dhexe uga ciyaara ee Saul Niguez ayay xulka Spain ku karbaasheen qaranka Italy, tartanka European Under-21 Championship, waxaanay sidaas ugu baxeen kulanka Finalka oo ay fooda isku dari doonaan xulka Germany. Laacibkan 22 sanno... read more »
Jarmalka Oo U Gudbay Finalka Euro Under ...
Jarmalka Oo U Gudbay Finalka Euro Under 21 Championship – Kadib Jid M...
Xulka qaranka Germany ayaa rigoodhayaal ku khaarajiyey xulka England, ciyaar semi finalka Horyaalka qaramada qaaradda Yurub ee da’doodu 21 jirada ka hooseyso ah. Julian Pollersbeck ayaa bed-baadiyey rigoodhihii uu ganay Nathan Redmond, sidaasna xulkiisa Germany ugu suurto galiyey inay iska... read more »
Xulka qaranka haeenka Denmark ayaa lagu riday ganaax ciyaaraha lagaga mamnuucay afar sannadood oo aanay ka qayb-geli doonin tartamada. Go’aan uu soo saaray xidhiidhka kubadda cagta... read more »
Xulka Germany Oo Noqday Horyaalka Qaarada Yurub ee Dadoodu 21 Jirada Ka Yar Tahay
Xiddigaha da’da yar ee xulka Germany ayaa ku guuleystay koobka aduunka ee ciyaaryahanada 21 jirada da’doodu ka hooseyso, kadib markii ay kulankii finalka 1-0 ku caraabiyeen... read more »
Saddex gool oo uu isku raaciyey, laacibka kooxda Atletico Madrid khadka dhexe uga ciyaara ee Saul Niguez ayay xulka Spain ku karbaasheen qaranka Italy, tartanka European Under-21... read more »
Jarmalka Oo U Gudbay Finalka Euro Under 21 Championship – Kadib Jid Markii England
Xulka qaranka Germany ayaa rigoodhayaal ku khaarajiyey xulka England, ciyaar semi finalka Horyaalka qaramada qaaradda Yurub ee da’doodu 21 jirada ka hooseyso ah. Julian Pollersbeck... read more »
Romania Oo Soo Ban-dhigtay Astaanta Qeybta Ay Ka Marti-gelinayaan...
Waddanka Romania ayaa boos ka heleya bikaacyada waa weyn ee indhaha caalamka iyada oo ay ugu wacan tahay iyadoo ku jirta magaalooyinka loo xulay marti-gelinta Koobka Qaramada Yurub ee UEFA EURO... read more »